रक्की भाईको ‘केजीएफ–२’को वल्र्डवाइड कलेक्शन १२२९.१४ करोड ! « News24 : Premium News Channel
रक्की भाईको ‘केजीएफ–२’को वल्र्डवाइड कलेक्शन १२२९.१४ करोड !
काठमाडौं । साउथका रक्की भाई अर्थात् यश स्टारर् ‘केजीएफः च्याप्टर २’ दर्शकमाझ रिलिजमा आएको ४२ दिन भइसकेको छ । फिल्मले छैटौं साता पनि बक्स अफिसमा राम्रौ कलेक्शन गरिरहेको छ । यो फिल्मको पछिल्लो वल्र्ड वाइड कलेक्शनको आँकडा सार्वजनिक गरिएको छ ।
ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजयबालनका अनुसार यो फिल्मले ४२ दिनसम्म आइपुग्दा विश्वभर १२२९ करोडको बक्स अफिस कलेक्शन गरिसकेको छ । उनले ट्वीट गर्दै ‘केजीएफः च्याप्टर २’ले पाँचौं साता १२१०.५३ करोडको वल्र्डवाइड कलेक्शन गरेको र छैटौं साता फिल्मले करिब १७ करोडको कमाई गरेको जानकारी गराएका छन् ।
एकदेखि पाचौं सातासम्म फिल्मको कुल कमाइः १२१०.५३ करोड
पिल्मले छैटौं साताको कुन दिन कति कमायो ?
छैटौं साताको पहिलो दिनः ३.१० करोड
छैटौं साताको दोस्रो दिनः ३.४८ करोड
छैटौं साताको तेस्रो दिनः ४.०२ करोड
छैटौं साताको चौथो दिनः ४.६८ करोड
छैटौं साताको पाँचौं दिनः १.८७ कमरोड
छैटौं साताको छैटौं दिनः १.४६ करोड
जम्माः १२२९.१४ करोड
यो फिल्म १४ अप्रिलदेखि दर्शकमाझ रिलिजमा आएको थियो । त्यसपछि अजय देवगनको रनवे ३४, टाइगर श्रफको हिरोपन्ती २, रणवीर सिंहको जयेशभाई जोरदार र कार्तिक आर्यनको भूल भूलैया २लगायतका ठूल–ठूला फिल्महरु रिलिजमा आएपनि केजीएफ–२ को कमाईमा कुनै असर गर्न सकेन ।
‘केजीएफः च्याप्टर २’लाई प्रसान्त नीलले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मको कहानीसमेत उनी आफैले लेखेका हुन् । यो फिल्ममा यशका अलवा सञ्जय दत्त, रवीना टण्डन, श्रीनीधि शेट्टी र प्रकाश राजलगायत मुख्य कलाकारहरु रहेका छन् ।
काठमाडाैँ । राज्य, समाज र जनताको उज्जवल भविष्यप्रति आशाको किरण फैलाएर साहित्य क्षेत्रमा उदाएकी कल्पना